မွေးနေ့ရှင် မိန်းကလေး (ကိုအရိပ်) | လမ်းအိုလေး
February 10, 2012 by lanolay	Leaveacomment
မွေးနေ့ရှင် မိန်းကလေးဟာ သူ့အသက်(၂၀)ပြည့် မွေးနေ့မှာ ခါတိုင်းလိုပဲ စားပွဲထိုးနေခဲ့တယ်။ သောကြာနေ့တွေမှာ သူ အမြဲ အလုပ် ဆင်း နေကျ ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်လို့ စီစဉ်ထားခဲ့တာတွေ သာ နေရာ ကျခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီ သောကြာညမှာတော့ သူ အားလပ်ရက် ယူမိမှာပဲ။ တခြား အချိန်ပိုင်း လုပ်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်နဲ့လဲ အဲဒီ ညအတွက် အလုပ်ချိန်ချင်း လဲဖို့ ညှိထားပြီးသား။ ဟုတ်တယ်လေ။ ပုံမှန် အတိုင်းသာဆိုရင် ဘယ်သူကများ အသက်(၂၀)ပြည့် မွေးနေ့ကို ဒေါသကြီးတဲ့ စားဖိုမှူး တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ဆူပူ သံတွေ၊ ဖရုံ နိုချီ (pumpkin gnocchi) နဲ့ ပင်လယ်စာ အကြော်အလှော် (seafood fritto) ပန်းကန်တွေကို စားသုံးသူတွေရဲ့ စားပွဲပေါ်အရောက် ခဲရာခဲဆစ် သွားချပေးရတာမျိုးတွေ ကြားထဲ ဖြတ်သန်း ချင်ပါ့မလဲ။ ဒါပေမယ့် လူစားလဲမယ့် ကောင်မလေးက (၁၀၄º)ထိ အဖျားတွေ တက်ပြီး အခြေအနေ ဆက် ဆိုးလာတယ်။ ၀မ်းတွေပါ လျှောပြီး အိပ်ရာထဲက မထနိုင် ဖြစ်သွားတာကို အချိန်ကပ်ပြီးမှ သိလိုက်ရတဲ့ နောက်ဆုံး သူပဲ အလုပ် ဆင်းရတော့တာပါပဲ။
ဖျားနေသူက ဖုန်း ဆက်တောင်းပန်လို့ “သိပ်ပူမနေပါနဲ့ဟာ။ အသက်(၂၀)ပြည့် မွေးနေ့ ဆိုပေမယ့် ငါလဲ ဘာမှ သိပ်ထွေထွေထူးထူး လုပ်ဖို့ မရှိပါဘူး” ဆိုပြီး ပြန် နှစ်သိမ့်ခဲ့ရသေးတယ်။ တကယ်တမ်းလည်း သူ့အနေနဲ့ အရမ်းကြီး စိတ်ညစ် မသွားပါဘူး။ အကြောင်း တစ်ခုကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက် အနည်းငယ်တုန်းက သူ့ချစ်သူနဲ့ တော်တော် အခြေအတင် စကား များထားခဲ့လို့ပါ။ အမှန်ဆို သူ့ချစ်သူဟာ အဲဒီညမှာ သူနဲ့အတူ ရှိနေခဲ့ရမှာ။ အထက်တန်းကတည်းက တွဲခဲ့ကြတဲ့ သူတို့ နှစ်ယောက်ဟာ ခုကိစ္စမှာ ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ စကား စများခဲ့ကြတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ခါးခါးသီးသီး အပြန်အလှန် အော်ဟစ်ရင်း ထင်မထားတဲ့ အကွေ့တစ်ကွေ့ကို ဆိုးရွားစွာ ရောက်သွားခဲ့ကြတယ်။ သူလည်း သိပ်ကို သေချာ သွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်ကြားက သက်တမ်းရှည် နှောင်ကြိုးတွေကို တစ်ခါတည်းနဲ့ အပြီး ဖြတ်ပစ် ခဲ့ဖို့ကိုပဲပေါ့။ သူ့ရင်ထဲမှာတော့ တစ်ခုခုဟာ ကျောက်တုံးတမျှ မာကျော လာပြီးတဲ့နောက် သေဆုံး သွားသလို မျိုးပါပဲ။ ပြတ်စဲမှု အပြီးမှာ သူ့ ချစ်သူဟောင်းက သူ့ကို ဖုန်း မခေါ်တော့သလို သူ့ဖက်ကလည်း ခေါ်ဖို့ မစဉ်းစားတော့ဘူး။
သူ့အလုပ်ဟာ တိုကျိုမြို့ ရိုပွန်ဂီ (Roppongi) အပိုင်ထဲက လူသိများတဲ့ အီတာလျံ စားသောက်ဆိုင် တစ်ခုမှာပါ။ ၆၀ နှောင်းပိုင်း နှစ်တွေတည်းက စ ဖွင့်ခဲ့တဲ့ အဲဒီ စားသောက်ဆိုင်က ဟင်းလျာတွေဟာ အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံးရယ်လို့ မဆိုသာပေမယ့် တကယ့်ကို လူသိများပါတယ်။ အဲဒီဆိုင်ကို စားသုံးသူတချို့ မကြာခဏ ဆိုသလို ပြန်လာ စားလေ့ရှိကြပြီး အဲဒီ စားသုံးသူတွေ အနေနဲ့လဲ ဒီဆိုင်ကြောင့် ဘယ်တော့မှ စိတ် အနှောင့်အယှက် မဖြစ်ခဲ့ရဘူး။ စားသောက်ခန်းမဟာ ငြိမ်သက် ချမ်းမြေ့ပြီး ဖိအား တစ်စွန်းတစ်စမှ မရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလည်း ဖြစ်တယ်။ လူငယ်အုပ်စုတွေ ထက်စာရင် အဲဒီစားသောက်ဆိုင်ကို သက်ကြီးပိုင်း စားသုံးသူတွေ ပိုလာ လေ့ရှိကြတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ စင်ပေါ်က လူတချို့နဲ့ စာရေးဆရာတွေတောင် ပါလေရဲ့။
အဲဒီမှာ တစ်ပတ်ကို (၆)ရက် အလုပ်လုပ်တဲ့ အချိန်ပြည့် စားပွဲထိုး နှစ်ယောက် ရှိတယ်။ သူနဲ့ တခြား ကောင်မလေး တစ် ယောက်ကတော့ ကျောင်းသူတွေ ဖြစ်ပြီး တစ်ယောက် (၃)ရက် တစ်လှည့်စီ အချိန်ပိုင်း လုပ်ကြတယ်။ မန်နေဂျာ တစ်ယောက် ရှိတယ်။ ငွေသိမ်းတဲ့ နေရာမှာ သက်လတ်ပိုင်း ခပ်ပိန်ပိန် အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ရှိတယ်။ သူကတော့ စားသောက်ဆိုင် စဖွင့်ကတည်းက ရှိနေခဲ့ပုံပဲ။ Little Dorrit ထဲက စိတ်ညစ်စရာ ခပ်မှိုင်းမှိုင်း ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်လို တစ်နေရာထဲ မှာပဲ သေသေချာချာ ကျောက်ချ နေလေ့ရှိတယ်။ သူ တစ်ယောက်ကတော့ စားသုံးသူတွေ ပေးတဲ့ ကျသင့်ငွေကို လက်ခံဖို့နဲ့ တယ်လီဖုန်း ကိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ တာဝန်(၂)ခုနဲ့ပေါ့။ လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာပဲ စကား ပြောလေ့ရှိပြီး အနက်ရောင် ၀တ်စုံ တစ်မျိုး တည်းကိုပဲ အမြဲ ၀တ်လေ့ရှိတယ်။ အေးစက် မာကျောတဲ့ အရာတစ်ခု ဆိုပါတော့။ အဲဒီ အမျိုးသမီးကိုသာ ညနက်နက် ပင်လယ်ထဲမှာ သွားထားခဲ့ရင် သူ့ကို တိုက်မိမယ့် ဘယ်လှေမျိုးကို မဆို နစ်မြုပ်စေမယ့် သူမျိုး။
မန်နေဂျာ ကတော့ အသက်(၄၀)ကျော်တာ အတော်ကြာပြီး ဖြစ်ပုံရတယ်။ အရပ်ရှည်ပြီး ရင်အုပ် ကားလေတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက အားကစားသမား တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့မှန်း သိသာစေတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့မေးစေ့နဲ့ ဗိုက်မှာ အသားပိုတွေ တက်စပြုနေပါပြီ။ တိုတို တောင့်တောင့် ဆံပင်တွေဟာ ငယ်ထိပ် တ၀ိုက်မှာ ပါးနေပြီး အထူး စပယ်ရှယ် လူပျို သိုးကြီးနံ့ သူ့ အပေါ်ကပ်နေပုံက အံဆွဲ တစ်ခုထဲမှာ ချောင်းဆိုးပျောက် ဆေးလုံးတွေနဲ့ တူတူ သိမ်းထားတဲ့ သတင်းစာ စက္ကူတွေလိုပါပဲ။ မွေးနေ့ရှင် မိန်းကလေးမှာလည်း အဲလိုအနံ့မျိုးနဲ့ ဦးလေး တစ်ယောက် ရှိတယ်။
မန်နေဂျာဟာ အင်္ကျီဖြူ အောက်ခံနဲ့ အနက်ရောင် ၀တ်စုံကို လည်စည်းနဲ့ အမြဲတွဲပြီး ၀တ်လေ့ရှိတယ်။ လည်စည်းမှ လက်နဲ့ ကျကျနန ချည်ထားတဲ့ လည်စည်းမျိုး။ မှန်မကြည့်ပဲ လည်စည်းကို အဲလို ပုံမျိုးထွက်အောင် ချည် နိုင်တာကိုလည်း သူ ဂုဏ်ယူတယ်။ သူ့ အလုပ်တွေကတော့ ဧည့်သည် အ၀င်အထွက်တွေကို ကြည့်တာ၊ သီးသန့် နေရာအတွက် ကြိုပေးထားတဲ့ စာရင်းတွေကို စိတ်နဲ့ မှတ်ရတာ၊ ပုံမှန် ဖောက်သည်တွေရဲ့ နာမည် တွေကို သိထားရတာ၊ အဲဒီ ဖောက်သည်ကြီးတွေကို ပြုံးပြ နှုတ်ဆက်ရတာ၊ စားသုံးသူတွေရဲ့ တိုင်ကြားချက်တွေ ပေါ်လာရင် တလေးတစား နားထောင် ပေးရတာ၊ ၀ိုင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင် အကြံပေးမှုတွေ လုပ်ရတာ၊ စားပွဲထိုး တွေရဲ့ အလုပ်ကို ခြုံငုံ ကြီးကြပ်ရတာတို့ပါပဲ။ အဲဒီ တာဝန်တွေကို နိစ္စဓူဝ ကျွမ်းကျင်လိမ်မာစွာ သူလုပ်တယ်။ သူ့ရဲ့ အထူးတာဝန် နောက်တစ်ခုကတော့ စားသောက်ဆိုင် ပိုင်ရှင်ရဲ့ အခန်းကို နေ့စဉ် ညစာ သွားပို့ရတာပါပဲ။
“ခြောက်ထပ်မှာ ဆိုင်ရှင်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခန်း ရှိတယ်လေ….”
မွေးနေ့ရှင် မိန်းကလေးက ပြောတယ်။
ကျမတို့ရဲ့ အသက်(၂၀)ပြည့် မွေးနေ့တွေ အကြောင်း သူနဲ့ကျမ တနည်းနည်းနဲ့ စကားစပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ ကျမတို့ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ဘယ်လို နေ့မျိုး ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကိုပေါ့။ လူအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ (၂၀)ပြည့် မွေးနေ့တွေကို မှတ်မိ တတ်ကြပါတယ်။ သူ့အသက် (၂၀)ပြည့် မွေးနေ့ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်က ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။
“ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟာ သူ့ဆိုင်မှာ ဘယ်တုန်းကမှ မျက်နှာ မပြခဲ့ဖူးဘူးဟ၊ သူ့ကို မြင်ဖူးတဲ့ လူဆိုလို့ မန်နေဂျာ တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်၊ သူတစ်ယောက်ထဲပဲ လုပ်ရ တဲ့ သီးသန့် တာဝန်က ဆိုင်ရှင်ကို ညစာ သွားပို့ရတာလေ၊ တခြား ဘယ် အလုပ်သမားမှ ဆိုင်ရှင်ဟာ ဘယ်လို ပုံပန်း ရှိတယ်ဆိုတာ မသိကြဘူး”
“ဒါဆို အဲဒီဆိုင်ရှင်က သူ့ဆိုင်ကချက်တဲ့ ညစာကို သူ့ပြန်ပို့ခိုင်းနေတာ ဆိုပါတော့ … ”
“အင်းပေါ့၊ ညတိုင်း (၈)နာရီထိုးပြီဆိုရင် မန်နေဂျာက သူ့အခန်းကို ညစာ သွား ပို့ရတော့တာပဲ၊ အဲဒီအချိန်က ဆိုင်မှာ အလုပ် အရှုပ်ဆုံး အချိန်လဲ ဖြစ်နေတော့ အဲလိုကြီး မန်နေဂျာ ပျောက် ပျောက်သွားတာ ငါတို့ အတွက် ပြဿနာ တစ်ခုပဲဟာ၊ ဒါပေမယ့် တခြားနည်းလမ်းလဲ မရှိ ဘူးလေ၊ ဒါက ဒီလိုပဲ လုပ်နေကျကိုး၊ ညစာကို သူတို့ ဟိုတယ်တွေမှာ room service အတွက် သုံးလေ့ရှိတဲ့ တွန်းလှည်း တစ်ခုခုပေါ် တင်မယ်၊ မန်နေဂျာက အဲဒီလှည်းကို ဓာတ်လှေကားပေါ် တွန်းသွားရင်းနဲ့ မျက်နှာကိုပါ ရိုရိုကျိုးကျိုး ဖြစ်နေအောင် တစ်ခါတည်း ပုံပြောင်းသွားမယ်၊ (၁၅)မိနစ်ကြာရင် လက်ဗလာနဲ့ ပြန်လာမယ်၊ နောက် တစ်နာရီကြာရင် သူ ပြန်တက်သွားပြီး ပန်းကန် ခွက်ယောက် အလွတ်တွေ ပြန်သယ်လာမယ်၊ နာရီ လည်သလို နေ့တိုင်းပဲ၊ ပထမဆုံး စတွေ့တုန်းကတော့ တော်တော်လေး ထူးခြားတဲ့ ကိစ္စပဲလို့ ငါတွေးခဲ့မိတယ်၊ ဘာသာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဓလေ့ တစ်ခုခုကို လုပ်နေတဲ့အတိုင်းပဲ သိလား၊ နောက် ကြာလာတော့လဲ ရိုးသွားတာပါပဲ၊ အဲလိုမျိုးလဲ ထပ် မတွေးဖြစ်တော့ပါဘူး”
ဆိုင်ရှင်က အမြဲ ကြက်သားနဲ့ပဲ စားတယ်။ ချက်ပုံ ချက်နည်းနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဟင်းရံပွဲတွေသာ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ နည်းနည်း ကွာသွားမယ်။ ပင်တိုင် ဟင်းကတော့ ကြက်သားပဲ။ စားဖိုမှူး အငယ်တစ်ယောက်က သူ့ကို တစ်ခါပြောဖူးတယ်။ ဘာများဖြစ်လာမလဲဆိုတာ သိချင်လို့ ကြက်သားရို့စ် တစ်မျိုးထဲကိုပဲ တစ်ပတ် တိတိ သူနေ့တိုင်း စမ်းပို့ ကြည့်ဖူးသတဲ့။ ဒါပေမယ့် ဘာ တိုင်သံ တောသံမှ ထွက်မလာခဲ့ဘူး ဆိုပဲ။ စားဖိုမှူးတိုင်းကတော့ ဘာကိုမဆို ခြားနားတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ စီမံချင် ကြတာ ချည်းပဲပေါ့။ စားဖိုမှူး တစ်ယောက်စီဟာ သူတွေးလို့ ကြံလို့ ရသလောက် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြက် သားဟင်းကို (ကိုယ့်အစွမ်းကိုယ် စိန်ခေါ်ကြည့်တဲ့ သဘောမျိုး) စီမံ ချက်ပြုတ် ကြည့်ခဲ့ကြတယ်။ တန်ဖိုးကြီး အဆင့်မြင့် ဆော့စ်တွေ သုံးတာမျိုး၊ အသား သွင်းတဲ့ အ၀ယ်တော် ပေါင်းစုံဆီက ကြက်အမျိုး ပေါင်းစုံ ပြောင်း သုံးကြတာမျိုး စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့ ကြိုးစားသမျှဟာ ဘာမှ ထူးခြား မလာခဲ့ပါဘူး။ ကျောက်ဂူ အလွတ်တစ်ခုထဲကို ကျောက်စရစ် ခဲလေးတွေ ပစ်ပစ် ထည့်နေကြသလို ပေါ့လေ။ နောက်ဆုံးတော့ အားလုံး လက်လျှော့ပြီး ဆိုင်ရှင့်ဆီကို ပုံမှန် ကြက်သားဟင်းလျာ တစ်မျိုးထဲပဲ နေ့စဉ် ပို့ကြရတော့တယ်။ သူတို့ ဆီက မှာတာ ဆိုလို့လဲ ဒါလေးပဲဟာကိုး။
နိုဝင်ဘာလ (၁၇)ရက်။ သူ့အသက် (၂၀)ပြည့် မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ အဲဒီနေ့မှာလဲ လုပ်ငန်းခွင်ဟာ ထုံးစံအတိုင်း စပြီး အသက် ၀င်လာ တယ်။ နေ့လည် တည်းက ရွာလိုက် တိတ်လိုက် ဖြစ်နေတဲ့ မိုးဟာ ညနေခင်း အစောပိုင်းမှာ ဆက်တိုက် ရွာလာပါတော့တယ်။ ညနေ(၅)နာရီမှာ မန်နေဂျာက အလုပ် သမားအားလုံးကို စုပြီး အဲဒီနေ့အတွက် အထူး ဟင်းလျာတွေကို ရှင်းပြတယ်။ စားပွဲထိုးမယ့် သူတွေကို မီနျူး ကတ်ပြားတွေ ပေးမကိုင်တဲ့ အတွက် အဲဒီ အချက်တွေကို တစ်ခုချင်း သေချာ မှတ်သား ထားရတယ်။ မီလန်ဗီးလ် (veal)၊ ငါး သေတ္တာနဲ့ ဂေါ်ဖီ pasta၊ သစ်အယ်သီးနဲ့ မလိုင် အချိုပွဲ စတာ တွေပေါ့။ တစ်ခါ တစ်လေမှာတော့ မန်နေဂျာက စားသုံးသူ ဖက်က မေးနိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ စမ်း မေးကြည့်တာမျိုး လုပ်တတ်တယ်။ အဲဒါ တွေအပြီးမှာ အလုပ်သမားတွေကို ညနေစာ ကျွေးပါတယ်။ ဒီစားသောက်ဆိုင်ရဲ့ စားပွဲထိုးတွေ အနေနဲ့ လူတွေ နားရပ်ပြီး သူတို့ မှာတာတွေကို နား ထောင်နေတုန်းမှာ ဗိုက်ထဲက တဂွီဂွီ ဖြစ်မနေသင့်ဘူး မဟုတ်လား။
ညနေ(၆)နာရီမှာ စားသောက်ဆိုင် တံခါးတွေ စဖွင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် မိုးကလဲ မစဲသေးတဲ့တော့ လူအလာကျဲပြီး တချို့ သီးသန့် စာရင်းပေးထားတဲ့ စားပွဲ တွေတောင် cancel ဖြစ်ကုန်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ မိုးကြောင့် သူတို့ ၀တ်ကောင်း စားလှတွေ ပျက်စီးကုန်မှာ မလိုလားဘူးလေ။ မန်နေဂျာဟာ နှုတ်ခမ်း တင်းတင်းစေ့ လမ်းလျှောက်နေပြီး စားပွဲထိုးတွေကတော့ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်း စတဲ့ ပုလင်းတွေကို အ၀တ်နဲ့ သုတ်သူသုတ်၊ စားဖိုမှူးနဲ့ ချက်ရေး ပြုတ်ရေးအကြောင်း ပြောသူပြောနဲ့ အချိန်ဖြုန်း နေကြတယ်။ သူကတော့ စားသောက်ခန်းထဲ ထိုင်နေတဲ့ တစ်တွဲ တည်းသော စုံတွဲကို စောင့်ကြည့်နေရင်း မျက်နှာကျက် စပီကာတွေထဲက သိုသို သိပ်သိပ် စီးထွက်လာနေတဲ့ စန္ဒရား အသားပေး ဂီတသံကို နား ထောင်နေတယ်။ ဆောင်းနှောင်းမိုးရဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့ ရနံ့ တစ်မျိုးဟာ စားသောက်ဆိုင်ထဲကို သူ့နည်း သူ့ဟန်နဲ့ တစိမ့်စိမ့် ၀င်လာနေလေရဲ့။
အဲဒီနေ့ ညနေ(၇)နာရီခွဲပြီးနောက်မှာ မန်နေဂျာ စပြီး နေမကောင်း ဖြစ်ပါတော့တယ်။ ကုလားထိုင် တစ်လုံးပေါ် ကမန်းကတန်း ထိုင်ချလိုက်ပြီး သူ့ ဗိုက်ကို လက်နဲ့ဖိရင်း ခဏငြိမ်နေတယ်။ သူ့ပုံစံက ရုတ်တရက်ကြီး ဗိုက်ကို သေနတ်နဲ့ အပစ် ခံလိုက်ရသလိုပဲ။ နဖူးထိပ်မှာ ချွေးတွေ သီးလာရင်းက “ငါ ဆေးရုံသွားရင် ကောင်းမယ် ထင်တယ်”လို့ ရေရွတ် လိုက်တယ်။ သူ့အတွက်တော့ ဆေးကု ယူရလောက်တဲ့ ပြဿနာဆိုတာ အရင်က မဖြစ်ခဲ့ ဖူးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀)နှစ်ကျော် သူဒီဆိုင်မှာ အလုပ် စ၀င်ကတည်းက တစ်ရက်မှ မပျက်ခဲ့ဘူး။ အဲလို နေထိုင် မကောင်းဖြစ်လို့၊ ထိခိုက် အနာတရဖြစ်လို့ အလုပ် ပျက်ကွက်တာမျိုး မရှိခဲ့ဖူးတာဟာလည်း မန်နေဂျာ့ အတွက် ဂုဏ်ယူစရာ နောက်တစ်ချက်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ခုလို နာကျင် ရှုံ့မဲ့နေပုံအရ သူ့ အခြေအနေဟာ အတော် ဆိုးနေတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။
မွေးနေ့ရှင် မိန်းကလေးက ထီး တစ်ချောင်းဆွဲ အပြင်ထွက်ပြီး တက္ကစီ တစ်စီး တားလာတယ်။ နောက် စားပွဲထိုးတစ်ယောက်က မန်နေဂျာကို မြဲမြဲတွဲ
ကား ပေါ်ဆွဲတင်ပြီး အနီးဆုံး ဆေးရုံတစ်ရုံကို ပို့ဖို့လုပ်တယ်။ ကားထဲ မ၀င်ခင်မှာ မန်နေဂျာက အသံ အစ်အစ်နဲ့ သူ့ကို မှာတယ်။
“(၈)နာရီမှာ အခန်း နံပါတ် (၆၀၄)ကို မင်း ညစာ သွားပို့ပေးပါ၊ မင်းလုပ်ရမှာက တံခါးဘဲလ်ကို နှိပ်ပြီး ‘ဒီမှာ ညစာရပါပြီ’လို့ပြော၊ ပြီးရင် ထားခဲ့ လိုက်ရုံပဲ”
“အခန်းနံပါတ် (၆၀၄)နော်”လို့ သူ သေချာအောင် ပြန် မေးလိုက်တယ်။
“(၈)နာရီ” မန်နေဂျာက ထပ်မှာတယ်။ “တိတိ” မျက်နှာကို နောက် တစ်ခေါက် ထပ်မဲ့ရင်း ကားထဲ ၀င်အပြီးမှာ တက္ကစီဟာ ထွက် သွားတော့တယ်။ မန်နေဂျာ ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်လည်း မိုးက တိတ်မယ့် လက္ခဏာ မပြသေးဘူး။ လူအလာကလဲ ကျဲနေဆဲပဲ။ တစ်ချိန်မှာ စားပွဲ တစ်ဝိုင်း နှစ်ဝိုင်းပဲ လူကျနေတယ်။ ဒီတော့ မန်နေဂျာ တစ်ယောက်နဲ့ စားပွဲထိုး တစ်ယောက်သာ ပျက်ကွက် ချင်တယ်ဆိုရင် အခုအချိန်ဟာ အကောင်းဆုံးအချိန်လို့ ဆိုရမယ်။ ဆိုင်မှာ တကယ်တမ်းသာ အလုပ်များကြပြီ ဆိုရင် တစ်ဆိုင်လုံး ရှိသမျှ အလုပ်သမား အားလုံးနဲ့ တောင် မနိုင်မနင်း ဖြစ်တတ် ကြတာ မျိုးကိုး။
ည(၈)နာရီမှာ ဆိုင်ရှင် အတွက် အသင့်ပြင်ပြီးသား ညစာကို တွန်းလှည်းလေးနဲ့ တင်ပြီး ခြောက်ထပ်ကို ဓာတ်လှေကားနဲ့ တက်ခဲ့တယ်။ ညစာကတော့ ရိုးရိုး ပုံမှန်ပါပဲ။ ဖော့ဆို့ ပြန်ဆို့ပေးထားတဲ့ ၀ိုင်နီ ပုလင်းတစ်ဝက်ရယ်၊ ကော်ဖီတစ်အိုးရယ်၊ ကြက်သားဟင်းပွဲနဲ့ ဟင်းသီး ဟင်း ရွက် ပြုတ်ရယ်၊ ပေါင်မုန့်နဲ့ ထောပတ် ရယ်ပါပဲ။ ဓာတ်လှေကား ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲ ကြက်သားဟင်းနံ့လေးလေးက ခဏချင်း ပျံ့နှံ့သွားပြီး မိုးနံ့ နဲ့ ရော သွား တော့တယ်။ ဓာတ်လှေကား ကြမ်းပြင်မှာ မျဉ်းစက်တွေ ချထားသလို မိုးစက်တွေကို တွေ့ရပုံအရ စိုနေတဲ့ ထီးနဲ့ တစ်ယောက်ယောက် ဟာ ဒီ ဓာတ်လှေကားကို မကြာသေးခင်ကမှ စီးသွားခဲ့ပုံပဲ။
စင်္ကြန်တစ်လျှောက် လှည်းကို တွန်းသွားရင်းက (၆၀၄)လို့ေ ရးထားတဲ့ အခန်း ရှေ့အရောက်မှာ သူ ရပ်လိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာ နှစ်ခါပြန် စစ် လိုက်တယ် – ၆၀၄ – ဟုတ်တယ်၊ ဒီအခန်းပဲ။ တစ်ချက် လည်ချောင်း ရှင်းလိုက်ပြီး တံခါးဘေးက ဘဲလ်ကို နှိပ် လိုက်တော့ ဘာသံမှ ပြန်ပေါ်မလာဘူး။ စက္ကန့်(၂၀)လောက် သူရပ်နေရင်း ဘဲလ်ကို နောက် တစ်ခေါက် ထပ် နှိပ်ကြည့်ဖို့ စဉ်းစားနေတုန်းမှာပဲ တံခါးဟာ အတွင်းဖက်ကို ပွင့်သွားပြီး ပိန်ပိန် ပါးပါး အဖိုးအို တစ်ယောက် ပေါ်လာတယ်။ အဲဒီ လူဟာ သူ့ထက် အရပ်ပိုပုတယ်။ မသကာ ၄-၅ လက်မ လောက်တော့ ပုမယ့်ပုံပဲ။ ခပ်မှိုင်းမှိုင်း ၀တ်စုံနဲ့ လည် စီးနဲ့။ အတွင်းက ရှပ် အင်္ကျီ ဖြူအောက်ခံမှာ ၀ါညိုညိုနဲ့ သစ်ရွက် ခြောက်ရောင် လည်စီးဟာ ထင်းနေတယ်။ လူ ပုံစံကတော့ တော်တော် သန့်ရှင်း သပ်ယပ်နေတယ်။ အ၀တ်တွေကို သေချာ မီးပူတိုက်ထားပြီး ဆံပင် ဖြူဖြူတွေကိ်ု ဖီးသင် ထားပုံဟာ ခုညမှာတင်ပဲ တစ်နေရာ ရာက တွေ့ဆုံပွဲ တစ်ခုကို သွားတော့မယ့် အတိုင်းပါပဲ။ မျက်ခုံးတွေ တ၀ိုက် ချိုင့်ဝင်သွားတဲ့ အရေး အ ကြောင်း တွေကိ်ုမြင်ပြီး ကောင်းကင်က ဆီး ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာ ပါတဲ့ လျှိူမြောင် နက်နက်ကြီးတွေကို သူ သွားသတိရမိတယ်။
“ဆရာ့ အတွက် ညစာပါရှင်”လို့ အသံ ခပ်အက်အက်နဲ့ ပြောမိရင်း သူ့ လည်ချောင်းကို တိတ်တိတ်လေး နောက် တစ်ခေါက် ထပ် ရှင်းလိုက်မိတယ်။ စိတ် လှုပ်ရှားနေတဲ့ အခါတွေမှာ အဲ့လိုပဲ သူ့အသံဟာ အက် အက် သွားလေ့ရှိတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ၊ မန်နေဂျာက ရုတ်တရက်ကြီး နေမကောင်း ဖြစ်လာလို့ ဒီနေ့ သူ့တာဝန်ကို ကျမ ၀င်ယူလိုက်ရတာပါ၊ ဆရာ့ အတွက် ညစာပါ …”
“အော် ဟုတ်လား”လို့ အဖိုးအိုက သူ့ကိုယ်သူ ပြန်ပြောနေသလို ပြောလိုက်တယ်။ သူ့ လက်တွေကတော့ တံခါးဘုကို ဆုပ်ထားဆဲပဲ။
“နေမကောင်း ဖြစ်သွားတယ် ဟုတ်စ … ခုန မင်းပြောတာ”
“ရုတ်တရက် ဗိုက်ထဲက အောင့်လာလို့ ခုပဲ ဆေးရုံကို သွားပါပြီ၊ အူအတက် ရောင်တာ များလားလို့ သူ ထင်နေတယ်”
“ဟာ ဒါမကောင်းဘူး”လို့ နဖူးပေါ်က အရေး အကြောင်းတွေကို ပွတ်လိုက်ရင်း အဖိုးအိုက ပြောတယ်။
“ဒါ လုံးဝ မကောင်းဘူုး”
လည်ချောင်း ထပ်ရှင်းရင်း သူ မေးလိုက်တယ်။ “ညစာကို အထဲ ယူလာ ခဲ့ရမလားရှင့်”
“အော် အင်း .. ဒါပေါ့ ”လို့ အဖိုးအိုက ပြောတယ်။
“အေးပေါ့၊ .. မင်းဆန္ဒ အတိုင်းပေါ့ … ငါ့အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်”
ကျမဆန္ဒအတိုင်း … ပြောပုံက အဆန်းပါလား။ ကျမရဲ့ ဆန္ဒက ဘာများပါလိမ့်။
အဖိုးအိုက တံခါးကို အပြည့် ဖွင့်ပေးလိုက်တော့ လှည်းကလေးကို တွန်းပြီး အခန်းထဲ သူ ၀င်လာခဲ့တယ်။ ကြမ်းပြင် တလျှောက် မီးခိုး ရောင် ကော်ဇော ပါးပါး ခင်းထားတယ်။ ဖိနပ် ချွတ်စရာ နေရာတော့ မတွေ့ရဘူး။ ပထမဆုံး တွေ့ရတဲ့ အခန်းကတော့ စာကြည့်ခန်း အကြီးစားပဲ။ လူနေတဲ့ အခန်းထက် ရုံးခန်း ပုံစံမျိုး ပို ပေါက်နေတယ်။ ပြတင်းပေါက်ကနေ မနီးမဝေးက တိုကျို မျှော်စင်ကို လှမ်းမြင်ရတယ်။ မျှော်စင်ရဲ့ စတီးလ် ကောက်ကြောင်းတွေကို ညရဲ့ အလင်းမှာ ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့ရတယ်။ ပြတင်းပေါက်ဘေးမှာ စာကြည့် စားပွဲကြီးတစ်လုံး၊ ဆိုဖာ အသေးတစ်လုံးနဲ့ love seat တစ်ခုံ ရှိနေ တယ်။ ဆိုဖာရှေ့က ပလတ် စတစ်ခင်း ကော်ဖီ စားပွဲဖက်ကို အဖိုးအိုက ညွှန်ပြလိုက်လို့ အဲဒီစားပွဲပေါ်မှာပဲ ညစာကို သူပြင်လိုက်တယ်။ လက် သုတ် ပုဝါအဖြူနဲ့ ငွေထည် အသုံး အဆောင်တွေ၊ ကော်ဖီအိုးနဲ့ ကော်ဖီခွက်၊ ၀ိုင်နဲ့ ၀ိုင်ဖန်ခွက်၊ ပေါင်မုန့်နဲ့ ထောပတ်၊ ကြက်သားဟင်းနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပန်းကန်တွေ။
“ဆရာ စားသောက်ပြီးရင် ပန်းကန်တွေကို ကျေးဇူးပြုပြီး ခါတိုင်းလို ခန်းမအပြင်ဖက် ထုတ်ထား ပေးနိုင်မလားရှင့်၊ နောက်တစ်နာရီမှာ ကျမ ပြန်လာ သိမ်းပါ့မယ်”
သူ့ ညစာသူ သဘောကျသလို အတွေးနက်နေပုံရတဲ့ အဖိုးအို ပြန်သတိဝင်လာတယ်။ “အော် အင်း.. ဒါပေါ့ .. ကျုပ် ခန်းမ အပြင် ဖက် ပြန် ထုတ် ပေးထားမယ်၊ တွန်း လှည်းပေါ်မှာ၊ နောက် တစ်နာရီ ၊ မင်းဆန္ဒအတိုင်း .. ”
ဟုတ်ကဲ့လို့ သူ့ စိတ်ထဲက ကြိတ် ပြောလိုက်တယ်။ လောလော ဆယ်တော့ ကျမ ဆန္ဒက အဲဒီ အတိုင်းပါပဲ။
“ဆရာ့ အတွက် ကျမ တစ်ခုခု လုပ်ပေး နိုင်တာများ ရှိပါသေးလားရှင်”
“မရှိ လောက်တော့ပါဘူး”လို့ ခဏ စဉ်းစားပြီး အဖိုးအိုက ပြန်ပြောတယ်။ သူ ၀တ်ထားတဲ့ အနက်ရောင် ဖိနပ်တွေဟာ အပြောင်လက်ဆုံး တိုက် ချွတ် ထားပုံရပြီး ခပ်သေးသေးနဲ့ ခေတ်ဆန်ဆန် ခပ်ကြော့ကြော့ပါပဲ။ ၀တ်စား ထားပုံကတော့ စတိုင် အပြည့်ပဲလို့ သူ တွေးမိတယ်။ ရပ်နေပုံကလဲ အသက်သာ ကြီးတယ်၊ ခပ်မတ်မတ်ပဲ။
“ကောင်းပါပြီဆရာ၊ ကျမ အလုပ်ပြန်ဝင်လိုက်ပါဦးမယ်”
“အော် ခဏလောက် စောင့်ပါဦး”
“မင်းရဲ့ အချိန် (၅)မိနစ်လောက် ကျုပ်ကို ပေးနိုင်မယ်လို့ ထင်သလား မိန်းကလေး၊ ကျုပ်မှာ မင်းကို ပြောချင်တာ တစ်ခု ရှိနေတယ်”
တောင်းဆိုပုံက သိမ်မွေ့လွန်းလို့ သူ နည်းနည်းတောင် ရှက်အမ်းအမ်း ဖြစ်သွားတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့၊ ရလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်”လို့ သူပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
“တကယ်လို့ (၅)မိနစ် လောက်ပဲ ဆိုရင်ပေါ့”
တကယ်တော့ အဖိုးအိုဟာ သူ့ အလုပ်ရှင်ပဲ။ သူတို့ လုပ်ခတွေကို နာရီနဲ့ တွက်ပြီး ပေးနေတာဆိုတော့ ဒါ မေးစရာတောင် မလိုတဲ့ ကိစ္စပဲလေ။ ပြီးတော့ ဒီအဖိုးအိုကို ကြည့်ရတာ သူ့ကို တစ်ခုခု ဆိုးဆိုးဝါးဝါး လုပ်မယ့်ပုံလဲ မပေါ်ပါဘူး။
“စကားမစပ် မင်းအသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ”လို့ စားပွဲနားမှာ မတ်မတ်ရပ် လက်ပိုက်ထားတဲ့ အဖိုးအိုက သူ့ကို တည့်တည့် စိုက်ကြည့် ရင်း မေးလိုက်တယ်။
“အခု ကျမ အသက်(၂၀)ပါရှင့်”
“အခု အသက်(၂၀)” အက်ကြောင်း တစ်ခုခုကို စူးစိုက် ကြည့်သလိုမျိုး သူ့ မျက်လုံးတွေကို ကျဉ်းပစ် လိုက်ရင်း အဖိုးအိုက ထပ်ပြောတယ်။
“အခု အသက်(၂၀)ပြည့်ပြီ။ ဘယ်တုန်း ကတည်းကလဲ”
“အခု လောလောဆယ် ပြည့်တာပါ…”
ခဏလောက် တုံ့ဆိုင်းနေပြီးမှ သူဆက်ပြောလိုက်တယ်။
“ဒီနေ့က ကျမ မွေးနေ့ပါဆရာ”
“ဒီလိုကိုး … ” အတော်ကြီး ရှင်းလင်း သွားပုံနဲ့ သူ့ မေးစေ့ သူပွတ်ရင်း အဖိုးအိုက “ဒီနေ့ .. ဟုတ်လား … ဒီနေ့ဟာ မင်းအသက်(၂၀)ပြည့် မွေးနေ့ ..”
တိတ်တဆိတ်ပဲ သူ ခေါင်းညိတ် ပြလိုက်တယ်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်(၂၀)တုန်းက ဒီနေ့မှာ ဒီကမ္ဘာကြီးထဲ မင်းဘ၀ စခဲ့တာပေါ့”
“ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ အဲဒါ အမှန်ပါပဲ”
“သိပြီ။ သိပြီ။” အဖိုးအိုက ပြောတယ်။ “ဒါ သိပ်ကောင်းတာပေါ့၊ အေးကွယ်၊ ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ ..”
“ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်ရှင်”လို့ ပြောလိုက်ရင်း တစ်နေ့လုံးမှာ သူ့အတွက် ပထမဆုံး ကြားလိုက်ရတဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းပါလား ဆိုတဲ့ အတွေးက လက်ကနဲ ဖြာကျတယ်။ တကယ်လို့သာ သူ့ မိဘတွေက အိုအိုက်တာ(Oita)ကနေ ဖုန်း လှမ်းဆက်ခဲ့ရင်တော့ သူ အိမ်ပြန်ရောက်လို့ answering machine ဖွင့်လိုက်ရင် တစ်ခုခု ကြားရဦးမှာပေါ့။
“အေးကွ။ ဒါဟာ အခမ်းအနားလေး တစ်ခု ကျင်းပဖို့ အကောင်းဆုံး အကြောင်းရင်းပဲ”လို့ အဖိုးအိုက ပြောလိုက်တယ်။ “ဆုတောင်း သောက်ပွဲလေး တစ်ခုဆို ဘယ့်နှယ်လဲ … ကျုပ်တို့ ဒီဝိုင်နီကို သောက်လိုက်လို့ ရတယ်…”
“ကျေးဇူးပါပဲ ဆရာရယ်။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်သေးပါဘူး။ အခုကျမက အလုပ် ဆင်းနေတာ ဆိုတော့”
“အောင်မလေး၊ တစ်ခွက် တစ်ဖလား လောက်နဲ့များ ဘာ သွား ထိခိုက်နိုင်လို့လဲဗျာ။ ကျုပ်ကသာ ပြဿနာ မရှိပါဘူးဆိုရင် ဘယ်သူကမှ မင်းကို အပြစ်တင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အခမ်းအနားလေး အတွက် အမှတ်တရ သောက်ပွဲလေး သက်သက်ပါ …”
အဖိုးအိုက ဖော့ဆို့ကို ဆွဲဖြုတ်ပြီး ပုလင်းထဲက ၀ိုင်နည်းနည်းကို မိန်းကလေးအတွက် ငှဲ့လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မှန်တံခါးတပ် ကက်ဘိနက်ထဲက ရိုးရိုး ရေခွက်တစ်ခွက်ထုတ်ပြီး သူ့ အတွက်သူ ၀ိုင်နည်းနည်း ထည့်လိုက်တယ်။
“ပျော်ရွှင်စရာ နေမွးနေ့ ဖြစ်ပါစေ” အဖိုးအိုက ပြောတယ်။ “ကြွယ်ဝပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့ ဘ၀တစ်ခုမှာ မင်းနေနိုင်ပါစေ။ အဲဒီဘ၀ကိုလဲ ဘယ်လို အရိပ် မည်း မျိုးမှ မထိုးပါစေနဲ့…”
သူတို့ ဖန်ခွက်ချင်း ချွင်ကနဲ ထိလိုက်ကြတယ်။
ဘယ်လို အရိပ်မည်းမျိုးမှ အဲဒီ အပေါ် မထိုးပါစေနဲ့။ အဖိုးအိုရဲ့ မှတ်ချက်ကို သူ့ စိတ်ထဲမှာ တိတ်တိတ်လေး ထပ်ကျော့မိတယ်။ ဘာကြောင့်များ အဲ လောက် သမားရိုးကျ မဟုတ်တဲ့ စကားလုံးတွေကို သူ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းအတွက် ရွေးခဲ့ရပါလိမ့်။
“မင်းရဲ့ အသက်(၂၀)ပြည့် မွေးနေ့ဟာ တစ်သက်မှာ တစ်ခါပဲ လာတယ် မိန်းကလေး၊ အစားထိုးလို့ မရတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပဲ..”
“ဟုတ်ကဲ့ဆရာ… ကျမ သိပါတယ်” ၀ိုင်ကို သတိနဲ့ တစ်ငုံငုံလိုက်ရင်း သူ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
“ပြီးတော့ ခုလို မင်းရဲ့ အထူးနေ့မှာ ဒဏ္ဍာရီထဲက ကြင်နာတတ်တဲ့ နတ်သမီးလေး တစ်ပါးလို ဒုက္ခခံပြီး ကျုပ်ဆီကို ညစာ လာပို့တယ်”
“ဒါ ကျမရဲ့ ၀တ္တရားပါ ဆရာ”
“မဟုတ်သေးဘူးလေ၊ အဲလိုလဲ မဟုတ်သေးဘူး” အဖိုးအိုက ခေါင်းကို ခပ်သွက်သွက် ခါလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ စာကြည့်စားပွဲနားက သားရေကုလားထိုင်ပေါ် ထိုင်လိုက်ပြီး သူ့ကို ဆိုဖာဖက် ညွှန်လိုက်တယ်။ ၀ိုင်ဖန်ခွက်ကို လက်ကကိုင်ရင်း ဆိုဖာ အစွန်းပေါ် မ၀ံ့မရဲ သူ ထိုင်ချလိုက်တယ်။ သူ့စကပ် အနားစကို သပ်၊ ဒူးနှစ်ဖက်ကို စေ့ရင်းက လည်ချောင်း ထပ် ရှင်းမိပြန်တယ်။ ပြတင်း မှန်ပေါ်မှာ မိုးစက်တွေ တလိမ့်လိမ့် စီးကျနေတယ်။ အခန်းထဲ မှာတော့ ထူးဆန်းစွာ တိတ်ဆိတ် နေလေရဲ့။
“ဒီနေ့ဟာ မင်းရဲ့ အသက်(၂၀)ပြည့်မွေးနေ့ ဖြစ်နေတယ်၊ ဒါ့အပြင် ဟောဒီ နှစ်သက်စရာ နွေးထွေးတဲ့ ညစာကိုလဲ ကျုပ်ဆီကို မင်းယူလာတယ်”လို့ လက်ရှိ အခြေအနေကို ထပ်ပြီး သေချာစေသလိုမျိုး အဖိုးအိုက ပြောလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ဖန်ခွက်ကို စားပွဲပေါ် ဒေါက်ကနဲ တင်လိုက်ရင်း “ဒါဟာ ထူး ခြားတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှု တစ်ခုလို့များ မထင်မိဘူးလား”
စိတ်ထဲမှာ ဝေခွဲရခက်နေပေမယ့် သူကြိုးစားပြီး ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တယ်။
သူ့ရော်ဝါရွက်ရောင် လည်စည်း အထုံးကို ထိလိုက်ရင်း အဖိုးအိုက ဆက် ပြောလိုက်တယ်။ “မင်းကို မွေးနေ့ လက်ဆောင် တစ်ခုပေးဖို့ ကျုပ်အတွက် အရေး ကြီးတယ်လို့ တွေးမိတယ်။ အထူး မွေးနေ့တစ်ခုဟာ အထူး ဂုဏ်ပြု လက်ဆောင်တစ်ခုကို တောင်းဆိုတယ်ဗျ”
ပျာပျာသလဲ သူ ခေါင်းခါလိုက်ရင်း “မလုပ်ပါနဲ့ ဆရာရယ်၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ထပ်မတွေးပါနဲ့တော့၊ ကျမက သူတို့ ပြောတဲ့အတိုင်း ညစာကို ယူလာပေးရုံ သက်သက်ပါ”
အဖိုးအိုက လက်ဝါး နှစ်ဖက် ကာပြလိုက်ရင်း “မဟုတ်ဘူး မိန်းကလေး။ မင်းသာ ထပ် မတွေးပါနဲ့တော့။ ကျုပ်စိတ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ‘လက်ဆောင်’ အမျိုး အစားက ထိလို့ ကိုင်လို့ရတဲ့ အစားမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ကျသင့် တန်ဖိုး ကပ်ထားတဲ့ အရာမျိုးလဲ မဟုတ်ဘူး။ လွယ်လွယ် ပြောရရင်တော့… ” သူ့ လက်တွေကို စားပွဲပေါ် တင်ပြီး ဖြည်းဖြည်းနဲ့လေးလေး အသက် တစ်ချက်ရှူလိုက်ရင်း “မင်းလို ချစ်စရာ နတ်သမီး ပျိုလေး တစ်ပါးကို ကျုပ် လုပ်ပေးချင်တာက မင်း အလိုရှိရာ ဆုတစ်ခုကို တောင်းစေပြီး အဲဒီ ဆုတောင်းကို ပြည့်အောင် လုပ်ပေးဖို့ပဲ၊ ဘယ်လို ဆုမျိုး တောင်းတောင်း၊ ကြိုက်တဲ့ ဆုသာ တောင်းပေရော့”
“ဆုတစ်ခု တောင်းရမယ်… ” လို့ မေးလိုက်ရင်း သူ့ လည်ချောင်းတွေ ခြောက်သွေ့ လာတယ်။
“မင်း ဖြစ်ချင်တာ တစ်ခုခုပေါ့ မိန်းကလေးရဲ့။ မင်းမှာ တောင်းချင်နေတဲ့ ဆုတစ်ခု၊ တစ်ခု ထဲနော်၊ အဲသလိုသာ ရှိမယ်ဆိုရင် အဲဒီ ဆုတောင်းကို ကျုပ်က ပြည့်အောင် လုပ်ပေးမယ်၊ ဒါဟာ ကျုပ်ပေးနိုင်တဲ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင် အမျိုးအစားပဲ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို မင်း အနေနဲ့ သေချာ စဉ်းစား ဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်နော်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျုပ်က တစ်ခုထဲပဲ လုပ်ပေးနိုင်မှာ မို့လို့ပဲ” အဖိုးအိုက လက်ချောင်း တစ်ချောင်း ကို လေထဲ မြှောက်ပြ လိုက်ရင်း “တစ်ခုထဲပဲ … ပြီးတော့မှ မင်း စိတ်ပြောင်းသွားပြီး ပြန်ပြင် ချင်လို့တော့ မရဘူးဗျ … ”
သူ ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ပဲ ငြိမ် ကျသွားတယ်။ တောင်းဆုတစ်ဆု …။ လေအဝှေ့မှာ ပြတင်းမှန်ကို မိုးစက်တွေ မညီမညာ လာရိုက်တယ်။ သူ ငိုင်နေတဲ့ တစ်ချိန်လုံး အဖိုးအိုဟာ ဘာမှမပြောပဲ သူ့ မျက်လုံးတွေထဲကိုပဲ စိုက်ကြည့် နေခဲ့တယ်။ အချိန်ရဲ့ မညီမညာခုန်နှုန်းတွေဟာ သူ့နားထဲကို လာ လာ ရိုက်နေလေရဲ့။
“မင်းမှာ တောင်းစရာ ဆု တစ်ခုခု ရှိသလား မရှိဘူးလား မိန်းကလေးရဲ့”လို့ ငြင်ငြင် သာသာ မေးလိုက်တယ်။
“အဲဒါ တကယ်ကို ဖြစ်ခဲ့တာနော်”လို့ ကျမကို တည့်တည့် စိုက်ကြည့်ရင်း သူကပြောတယ်။
“ငါ ပုံပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး”
“အင်းပါ။ ဟုတ်ပါပြီ”လို့ ကျမ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ သူဟာ လေထဲမှာ ပါလာတဲ့ ခပ်ကြောင်ကြောင် ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်ကို ပုံလုပ်ပြီး ပြောနေမယ့် လူစားမျိုးမှ မဟုတ်ပဲ။
“အဲဒီတော့ နင် ဆုတောင်းခဲ့လား”
သူ ကျမကို တွေပြီး စိုက်ကြည့်နေတယ်။ ခဏ ကြာတော့မှ သက်ပြင်းလေး တစ်ချက် ချလိုက်ရင်း “ငါ့ကို အထင်တော့ မမှားပါနဲ့။ ငါ့ အနေနဲ့ အဲဒီလူကို ရာ နှုန်းပြည့် အမှန်အကန် ယုံကြည် မနေခဲ့တာကတော့ သေချာတယ်။ ဆိုလိုတာကဟာ အသက် တောင်(၂၀)ပြည့်မှတော့ ငါလဲ နတ်သမီး ပုံပြင် တွေကို ယုံတဲ့ အရွယ်မှ မဟုတ်တော့တာ။ တကယ်လို့ သူသာ နောက်နေတာ ဆိုလို့ ကတော့ ငါလဲ အဲဒီ နေရာတင် ချက်ချင်း သူ့ဟာသကို သူ့ ပြန် ပေးလိုက်မလို့ပါပဲ။ သူ့ပုံစံက သပ်သပ် ရပ်ရပ် ကျစ်ကျစ် လျစ်လျစ်နဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ ရယ်မြူး ရိပ်သန်းနေတဲ့ လူအို တစ်ယောက်ပဲ။ ဒါနဲ့ သူ့ ဇာတ်လမ်းကို ဆက်ကဖို့ ငါ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီနေ့ဟာ ငါ့ အသက်(၂၀)ပြည့် မွေးနေ့လဲ ဖြစ်နေတယ်။ ယုံတာ မယုံတာ ခဏ ခေါက်ထားပြီး ရိုးရိုး သာမန်မဟုတ်တဲ့ အဖြစ်မျိုး တစ်ခုတော့ အဲဒီနေ့မှာ ဖြစ်ရင် ကောင်းမယ်လို့ ထင်တယ်လေ”
ဘာမှ မပြောပဲ ကျမ ခေါင်းညိတ် ပြလိုက်တယ်။
“ငါ ဘယ်လို ခံစားခဲ့ရမယ် ဆိုတာ နင် နားလည်မှာပါ။ ဘာ တစ်ခုမှ ထူးခြား မလာဘဲ ဘယ်သူကမှ မွေးနေ့ ဆုတောင်း လုပ်တာ မခံရဘဲနဲ့ ငါ့ အသက်(၂၀)ပြည့် မွေးနေ့ဟာ အပြီး သတ်တော့မှာလေ။ အဲ့လို အချိန်မှာ ငါ လုပ်နေတာဆိုလို့ တော်တယ်လီနီ (tortellini) နဲ့ အန်ချိုဗီ ဆော့စ် (anchovy sauce) တွေကို လူတွေရဲ့ စားပွဲပေါ် လိုက်ချပေးနေရတာပဲ ရှိမယ်”
ကျမ နောက်တစ်ခေါက် ထပ် ခေါင်းညိတ် ပြလိုက်တယ်။ “အေးပါ ၊ ငါနားလည်ပါတယ်”
“အဲဒီတော့ ငါ ဆုတစ်ဆု တောင်းလိုက်တယ်။”
အဖိုးအိုဟာ ဘာမှမပြောဘဲ သူ့ကိုဆက်ပြီး စိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ သူ့လက်တွေကို စားပွဲပေါ်မှာ တင်ထားဆဲ။ စားပွဲပေါ်မှာ တခြား ရှိနေ တာ တွေကတော့ စာရင်း စာအုပ်တွေလို့ ယူဆရတဲ့ ဖိုင်တွဲ အထူကြီး တချို့ရယ်၊ စာရေး ကိရိယာတချို့ရယ်၊ ပြက္ခဒိန် တစ်ခုရယ်၊ အစိမ်း ရောင် အုပ်ဆောင်းနဲ့ မီးအိမ် တစ်လုံးရယ် တို့ပါပဲ။ အဲဒါတွေ ကြားထဲမှာ အဖိုးအိုရဲ့ သေးငယ်တဲ့ လက်အစုံဟာ နောက်ထပ် စားပွဲတင် ပရိဘောဂ တစ်စုံနဲ့ တောင် တူနေသလို ထင်ရတယ်။ ပြတင်းမှန်တွေကို မိုးဟာ ဆက်ပြီး ပက်နေဆဲ။ တိုကျို မျှော်စင်ဆီက အလင်းရောင်တွေဟာ မိုးစက် တွေကြားထဲ ထိုးဖောက် ဖြာထွက်နေတယ်။
အဖိုးအိုရဲ့ နဖူးပေါ်က အစင်း ကြောင်းတွေဟာ နည်းနည်းလေး ပိုပြီး နက်သွားသလိုပဲ။ “အဲဒါ မင်းဆုတောင်းလား”
“ဟုတ်ကဲ့”လို့ သူပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ “အဲဒါ ကျမရဲ့ ဆုတောင်းပါပဲ”
“မင်းအရွယ် မိန်းကလေး တစ်ယောက်အတွက် နည်းနည်း ထူးခြားနေသလိုပဲ”လို့ အဖိုးအိုက ပြောတယ်။ “ကျုပ်က တခြားဟာ တစ်ခုခု ကို မျှော်လင့် ထားတာ”
“တကယ်လို့ အဲဒါက မကောင်းဘူး ဆိုရင် ကျမ တခြားဆုတစ်ခုခု တောင်းလိုက်မယ်လေ”လို့ လည်ချောင်း ရှင်းလိုက်ရင်း သူပြောလိုက်တယ်။
“ကိစ္စမရှိဘူး။ ကျမ တခြား တစ်ခုခု ထပ် စဉ်းစားကြည့်မယ်”
“နိုး နိုး” သူ့လက်တွေကို လေထဲမှာ အလံလို ဝှေ့ယမ်း လိုက်ရင်းနဲ့ အဖိုးအိုက ပြောတယ်။ “အဲဒါ ဘာမှ မမှားဘူး မိန်းကလေး။ နည်းနည်း အံ့သြစရာ ကောင်းသွား ရုံလေးပါပဲ။ မင်းမှာ တခြား တစ်ခုခု မရှိဘူးလား။ ထားပါတော့ မင်း ပိုချော ပိုလှချင်တာ မျိုးတို့၊ ဥာဏ် ပိုကောင်းချင်တာ မျိုးတို့၊ ချမ်းသာ ချင်တာမျိုးတို့။ အဲလို ရိုးရိုး သာမန် မိန်းကလေး တစ်ယောက် လိုချင်မယ့် ဟာတွေ မတောင်းဘဲနဲ့ မင်း အဆင်ပြေ ပါတယ်နော် …”
သင့်တော်မယ့် စကားလုံးတွေ လိုက်ရှာဖို့ သူ အချိန်နည်းနည်း ယူလိုက်တယ်။ အဖိုးအိုက လက်တွေကို စားပွဲပေါ် ပြန်ချထားပြီး ဘာမှ မပြောပဲ စောင့်နေတယ်။
“ကျမလဲ ပိုချောပိုလှ ဥာဏ် ပိုကောင်းပြီး ချမ်းချမ်း သာသာ နေချင် တာပေါ့ ၊ ဒါပေမယ့် အဲလို ဟာတွေထဲက တစ်ခုခုသာ တကယ် ဖြစ်လာခဲ့ရင် ကျမ ဘာ ဆက်လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ တွေးကြည့်လို့ မရဘူး၊ ကျမ ကိုင်တွယ်တတ်တာ ထက်တောင် ပိုချင်ပိုလိမ့်မယ်၊ ခုထက်ထိ ဘ၀ဆိုတာ ဘာမှန်း ကျမ သေချာ မသိသေးဘူး ၊ သူ့သဘောသဘာဝကို ကျမ နားမလည်သေးဘူး”
“အော်၊ သိပြီ” အဖိုးအိုက သူ့လက်ချောင်းတွေကို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ယှက်လိုက်ပြီး ပြန် ခွာလိုက်တယ်။ “ကျုပ်သိပြီ …”
“ဒါဆို ကျမ ဆုတောင်းက အဆင်ပြေရဲ့လား”
“ပြေပါတယ်”လို့ သူပြောတယ်။ “ပြေပါတယ်၊ ဒါ့အတွက် ကျုပ်မှာ လုံးဝ ပြဿနာ မရှိဘူး”
ချက်ချင်းပဲ အဖိုးအိုဟာ လေထဲက အစက် တစ်စက်ကို စူးစူး စိုက်စိုက် လှမ်း ကြည့်လိုက်တယ်။ သူ့ နဖူးကြောတွေ ပိုရှူံ့သွားတယ်။ သူ့အတွေး တွေကို အာရုံ စိုက်နေတုန်း သူ့ ဦးနှောက်ပေါ်မှာ ပေါ်နေတဲ့ အစင်းကြောင်းတွေ များလား လို့တောင် ထင်စရာပဲ။ သူ့ကို ကြည့်ရတာ လေထဲမှာ ပေါလော မျောနေတဲ့ မြင်နိုင်စွမ်း မရှိသော အရာတစ်ခုခုကို စိုက်ကြည့် နေသလိုပါ။ အဖိုးအိုဟာ သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို အကျယ်ကြီး ဆန့် ထုတ်လိုက်တယ်။ ကုလားထိုင်ပေါ် ထိုင်နေရာကနေ နည်းနည်း ကြွလိုက်ပြီး လက်ဖ၀ါးနှစ်ခုကို ဖြောင်းကနဲ မြည်သွားအောင် ရိုက် လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကုလား ထိုင်ပေါ် ပြန်ထိုင်ပြီး သူ့ လက်ချောင်း ထိပ်လေးတွေနဲ့ မျက်ခုံးထက်က အစင်းကြောင်းတွေကို ပြန် ဖျော့ပေးနေတဲ့ပုံမျိုး ခပ်ဖြည်းဖြည်း ပွတ်သပ်နေတယ်။ ပြီးတော့မှ မိန်းကလေးဖက် လှည့်ပြီး နူးနူးညံ့ညံ့ တစ်ချက် ပြုံးပြလိုက်တယ်။
“လုပ်လိုက်ပြီ”လို့ အဖိုးအိုက ပြောတယ်။ “မင်းဆုတောင်း ပြည့်သွားပြီကွယ့်”
“အေး … ဘာမှ ပြဿနာ မရှိဘူး၊ မင်းရဲ့ ဆုတောင်းဟာ ပြည့် သွားခဲ့ပြီ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့၊ ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ၊ မင်းအလုပ်ကို မင်း ပြန်လို့ရပါပြီ။ တွန်းလှည်း အတွက် မပူပါနဲ့။ ကျုပ် အပြင် ပြန် ထုတ်ပေးထားမယ်”
စားသောက်ဆိုင်ကို ဓာတ်လှေကားနဲ့ သူ ပြန်ဆင်းလာခဲ့တယ်။ လက်ထဲမှာ ဘာမှမရှိတော့တဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ သူဟာ သိသိသာသာ ကြီး ကို ပေ့ါပါး နေခဲ့ပြီး ထူးခြား ဆန်းကြယ်တဲ့ တိမ်စိုင် တစ်ခုပေါ် လမ်းလျှောက် နေရသလို မျိုးတောင် ခံစားမိတယ်။
“အဆင် ပြေရဲ့လား၊ အစ်မကို ကြည့်ရတာ အတော် ပင်ပန်းနေပုံပဲ”လို့ စားပွဲထိုး အငယ် တစ်ယောက်က သူ့ကို မေးတယ်။
သူ ခပ်ဝါးဝါး တစ်ချက် ပြုံးပြရင်း ခေါင်းခါ လိုက်တယ်။ “ဟယ် … တကယ်လား၊ ငါ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး”
“ဆိုင်ရှင့် အကြောင်း ပြောပြစမ်းပါဗျာ၊ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ … ”
“ငါလဲ မသိပါဘူးဟာ၊ သူ့ကို သေချာ မမြင်လိုက်ရဘူး”ဆိုပြီး စကားကို ခပ်မြန်မြန် ဖြတ်လိုက်တယ်။
နောက် တစ်နာရီမှာ တွန်းလှည်း သွားယူဖို့ သူ အပေါ် ပြန်တက်သွားတယ်။ ပန်းကန် ခွက်ယောက်တွေ နေရာတကျနဲ့ တွန်းလှည်းလေးဟာ ခန်းမထဲမှာ ရှိနေတယ်။ အုပ်ဆောင်းကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကြက်သားနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ကုန်သွားတာ တွေ့ရတယ်။ ၀ိုင်ပုလင်း နဲ့ ကော်ဖီအိုး ထဲမှာလဲ ပြောင်လို့။ အခန်း(၆၀၄)ရဲ့ တံခါးဟာ အသက်မဲ့စွာ ပိတ်နေလေရဲ့။ အဲဒီတံခါး ပွင့်များ ပွင့်လာနိုးနဲ့ သူ အဲဒီနားမှာ ခဏရပ်နေခဲ့မိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တံခါးကတော့ ပွင့်မလာခဲ့ဘူး။ တွန်းလှည်းကို ဓာတ်လှေကားထဲ သွင်းပြီး သူ ပြန် ဆင်းလာခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ပန်းကန် ဆေးတဲ့နေရာကို တွန်း သွားတယ်။ စားဖိုမှူးက ခါတိုင်းလိုပဲ ပြောင်တလင်း ခါပြီး ပြန်ပါလာတဲ့ ပန်းကန်ကို ကြည့်ပြီး အမှတ်မဲ့ ခေါင်းတစ်ချက် ညိတ်တယ်။
“ဆိုင်ရှင်ကို ထပ်မတွေ့ရတော့ဘူး”လို့ သူ ဆက်ပြောတယ်။ “တစ်ခါမှကို မတွေ့တော့တာ၊ အဲဒီညက မန်နေဂျာ ဖြစ်တာကလဲ ရိုးရိုး ဗိုက်အောင့်တာပဲ ဆိုတော့ နောက်တစ်နေ့ ကစပြီး ဆိုင်ရှင်ကို ညစာပို့တဲ့ ကိစ္စကို သူပဲ ဆက်လုပ်တယ်၊ နှစ်သစ်ကူးပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ငါလဲ အဲဒီ အလုပ်က ထွက်ခဲ့တယ်၊ အဲဒီ နောက်ပိုင်း ထပ် မရောက်တော့ဘူး။ ငါ့ စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုက သတိ ပေးနေပုံမျိုး အဲဒီနားကို မသွားတာ ပိုကောင်း မယ်လို့ ခံစားရတယ်”
ဖန်ခွက်အောက်ခံ ကတ်ထူပြားလေးကို ဆော့နေရင်းနဲ့ သူ အတွေး လွန် သွားပြန်တယ်။ “တစ်ခါတစ်လေ ငါ့စိတ်ထဲမှာ အဲဒီ အသက်(၂၀)ပြည့် မွေးနေ့တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တာတွေ အားလုံးဟာ အိပ်မက်တစ်ခုလိုပဲလို့ ထင်မိတယ်။ ဒါတွေဟာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလို့ တစ် ခုခုက စိတ်ထဲမှာ လာ ပြောနေတဲ့ ပုံမျိုး။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေ တကယ် ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ငါ သေချာတယ်။ အခန်း(၆၀၄)ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ပရိဘောဂ အကုန် လုံးနဲ့ အသေးအဖွဲ မှန်သမျှ အားလုံးကို ပြတ်ပြတ် သားသားကြီးကို ငါ ပြန်တွေးကြည့်လို့ ရနေတယ်။ အဲဒီမှာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေဟာ တကယ်ပဲ။ ပြီးတော့ ငါ့အတွက်လဲ အရေးကြီးတဲ့ အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကို ဆောင်နေတယ်”
သောက်စရာရှိတာ သောက်ရင်း ကျမတို့ နှစ်ယောက်သား ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ခဏ ငြိမ်သွားကြတယ်။
“နင့်ကို တစ်ခု မေးရင် စိတ်ဆိုးမလား”လို့ ကျမ မေးလိုက်တယ်။ “ဒါမှမဟုတ် အတိအကျ မေးရရင် နှစ်ခုဆိုပါတော့”
“မေးလေ”လို့ သူက ပြန်ပြောတယ်။ “ငါ အဲဒီတုန်းက ဘာ ဆုတောင်းခဲ့လဲလို့ မေးမလို့ထင်တယ်။ အဲဒါ နင် အသိချင်ဆုံး ကိစ္စ ဖြစ်မှာပဲ”
“ဒါပေမယ့် နင့်ကြည့်ရတာ အဲဒီ အကြောင်း ပြောပြချင်တဲ့ပုံ မပေါက်ဘူး”
“ဟုတ်လား … ”
ကျမ ခေါင်းညိတ် ပြလိုက်တယ်။
ကတ်ထူ ပြားလေးကို ပြန် ချထား လိုက်ရင်း မမြင်နိုင်တဲ့ ခပ်ဝေးဝေး နေရာတစ်ခုကို ငေးကြည့်နေသလို သူ့ မျက်ဝန်းတွေ ကျဉ်းသွားတယ်။
“ကိုယ် ဘာ ဆုတောင်းခဲ့တယ် ဆိုတာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်ပြောပြလို့ မရဘူး၊ သိလား”
“အေးပါဟာ၊ ငါလဲ နင့်ဆီက မရအရ ဆွဲမထုတ်ပါဘူး”လို့ ကျမ ပြောလိုက်တယ်။ “အဲဒီဆုတောင်း ပြည့်သွားလား မပြည့်သွားဘူးလား ဆိုတာကိုတော့ သိချင်သား၊ ပြီးတော့ အဲဒီဆုတောင်းဟာ ဘယ်လိုဟာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ပိုင်းမှာ နင်ရွေးခဲ့တဲ့ ဆုတောင်းအတွက် နောင်တရသွားလား၊ တခြား ဆု တစ်ခုခု မတောင်းခဲ့ရ ကောင်းလားလို့ စိတ်မကောင်း မဖြစ်မိဘူးလားလို့ပါ”
“ပထမ မေးခွန်းအတွက် အဖြေကတော့ ‘အင်း’ နဲ့ ‘ဟင့်အင်း’ ပဲ၊ ငါရှေ့ဆက်ပြီး အများကြီး နေရဖို့ ရှိသေးတယ်၊ အဆုံးသတ်မှာ အခြေအနေတွေက ဘယ်လို ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ မသိရသေးဘူးလေ”
“ဆိုတော့ အဲဒီ ဆုတောင်းဟာ အချိန်ယူပြီးမှ ပြည့်မပြည့် ပြောလို့ရမယ့် ဆုတောင်းမျိုးပေါ့ …”
“အင်း… ပြောလို့ရတယ်၊ အချိန်ဟာ အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုမှာ ပါနေတယ်”
ကျမ အဲဒါကို တစ်ချက် စဉ်းစားကြည့်တယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကူးထဲပေါ်လာတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အရာကတော့ အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ မုန့်ကြီး တစ်ခုကို မုန့်ဖုတ် စက်ထဲမှာ မီး အေးအေးနဲ့ ဖုတ်နေပုံပါပဲ။
“ဒုတိယ မေးခွန်းအတွက် အဖြေကရော”
“ထပ်မေးပါလား… ဘာပါလ်ိမ့် …”
“အဲဒီ ဆုတောင်းအတွက် နောင်တ ရခဲ့သလား မရခဲ့ဘူးလား ဆိုတာလေ”
အဲဒီမှာ ခဏ တိတ်သွားတယ်။ ကျမကို ကြည့်နေတဲ့ သူ့ မျက်လုံးတွေထဲမှာ ဘာ အဓိပ္ပာယ်မှ မရှိတော့ သလိုပဲ။ သူ့ နှုတ်ခမ်းတွေမှာ ခြောက်သွေ့တဲ့ အပြုံး တစ်ခု ရိပ်ရိပ်ကလေး ပေါ်လာတယ်။ ဒါနဲ့ ကျမလဲ ဘာမှ ဆက်မပြောတာ ကောင်းလ်ိမ့်မယ်လို့ သဘောရလိုက်တယ်။
“ငါ အခု အိမ်ထောင် ကျပြီးပြီ”လို့ သူပြောတယ်။ “ငါ့ထက် သုံးနှစ်ပိုကြီးတဲ့ စာရင်းကိုင်တစ်ယောက်နဲ့။ ငါ့မှာ ကလေးနှစ်ယောက် ရှိ တယ်။ ယောင်္ကျားလေး တစ်ယောက် မိန်းကလေး တစ်ယောက်။ ငါတို့မှာ Irish setter ခွေးတစ်ကောင် ရှိတယ်။ ငါမောင်းတဲ့ ကားက အော်ဒီ(Audi)။ ငါ့ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တစ်ပတ် နှစ်ခါ တင်းနစ် ရိုက်တယ်။ ဒါဟာ ခုလောလောဆယ် ငါနေနေတဲ့ ဘ၀ပဲ”
“တော်တော် ကောင်းပုံရတာပဲ”လို့ ကျမ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
“အဲဒီ အော်ဒီကားရဲ့ ဘန်ပါမှာ အချိုင့် နှစ်ချိုင့် ထင်နေပြီ”
“ဟေး၊ ဘန်ပါဆိုတာ ချိုင့်ဖို့ လုပ်ထားတာပါကွာ”
“ဘန်ပါ စတစ်ကာ လုပ်လို့ သိပ်ကောင်းမယ့် စကားပဲ”လို့ သူပြောတယ်။ “ဘန်ပါတွေဟာ ချိုင့်ဖို့…”
အဲလို သူ ပြောလိုက်ချိန်မှာ သူ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ကျမကြည့်လိုက်မိတယ်။
“ငါပြောချင်တာက ဒီလိုဟာ” နားသန်သီး တစ်ဖက်ကို ပွတ်နေရင်း လေသံ ခပ်ဖျော့ဖျော့နဲ့ သူ ဆက်ပြောတယ်။ သူ့နားသန်သီး ကျပုံက အတော်လှ တယ်။ “ဘယ်လို ဆုမျိုးပဲ တောင်းတောင်း၊ ဘယ်လောက် ဝေးဝေးပဲ သွားသွား၊ လူတွေဟာ သူတို့ ကိုယ်တိုင်ထက် တခြား ဘာမှ မပိုနိုင်ပါဘူး။ ဒါပါပဲ … ”
“ဒါ နောက်ထပ် ဘန်ပါ စတစ်ကာကောင်း တစ်ခုပဲ”လို့ ကျမ ပြောလိုက်တယ်။ “ဘယ်လောက် ဝေးဝေးသွားသွား လူတွေဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင်ထက် ဘာမှ ပိုမဖြစ်နိုင်ဘူး”
သူ စိတ်ပါ လက်ပါနဲ့ အကျယ်ကြီး ထရယ်လိုက်တယ်။ စောစောက မြင်ရတဲ့ ခြောက်သွေ့ အပြုံးရိပ်လည်း သူ့ဆီက လွင့်သွားပုံပါပဲ။
စားပွဲကို တံတောင်နဲ့ ထောက်ရင်း ကျမဖက်ကို လှည့်ကြည့်တယ်။ “ငါ့ကို ပြောပြပါလား”လို့ ပြောတယ်။ “ငါ့ နေရာမှာသာ ဆိုရင် နင်ဘာ ဆု များ တောင်းမလဲ”
“နင် ဆိုလိုတာက ငါ့အသက်(၂၀)ပြည့် မွေးနေ့မှာလား … ”
ကျမ အဲဒါကို ခဏလောက် စဉ်းစား ကြည့်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို ဆုတောင်း တစ်ခု တစ်လေမှ ထွက်မလာဘူး။
“ငါဘာမှ စဉ်းစားလို့မရဘူး”လို့ ၀န်ခံလိုက်မိတယ်။ “ခုချိန်မှာ အသက် (၂၀)ပြည့် မွေးနေ့ဟာ ငါနဲ့ အတော်ကြီး ဝေးသွားပြီလေ”
“တကယ်ပဲ နင်တစ်ခုမှ စဉ်းစားလို့ မရဘူးလား…”
ကျမ မျက်လုံးတွေထဲကို တည့်တည့်ကြီး စိုက်ကြည့်ရင်း သူ ပြောလိုက်တယ်။
“အဲဒါ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ နင့်ဆုကို နင် တောင်းပြီးသွားလို့ပဲ”
မွေးနေ့ရှင် – သိုးထိန်း (အန္တိမ)
(Birthday Girl – Haruki Murakami. English Translation: Jay Rubin.)
Mirrored from: Moveable ဘာသာပြန် – ကိုအရိပ်။